Ngokwesiko esivunyelwe ngokuvamile, isihlahla esinemihlobiso yisipho esivela ku-Athena, unkulunkulukazi wokuhlakanipha. Ngakho-ke, iGreece yindawo yokuzalwa yama-oliva kaKalamata. Kusukela ezikhathini zasendulo, amaGreki adle izithelo zalesi sihlahla. Futhi hhayi nje kuphela, kodwa futhi ejwayele lezi ezinye izizwe eziningi. Futhi kusuka kuminqumo uwenza amafutha omangalisayo, athole isicelo ekuphekeni, nase-cosmetology. Futhi namuhla igatsha lomnqumo liwuphawu lwezwe.
Kunezinhlobo eziningi zeminqumo. I-Greece kuphela, ngokusho kochwepheshe, ikhula izinhlobo ezimbalwa zokukhiqiza. Phakathi kwabo, ama-olivali kaKalamata mhlawumbe oyedwa odume kakhulu emhlabeni wokupheka. Atshalwa eduze nomzana waseKalamata (ngakho igama), eningizimu yePeponponnese. Ukuvuna kusukela ngoNovemba kuze kube ngamaholide kaKhisimusi.
Imifino yama-kalamata ibukeka ngokugcwele, inamanzi futhi ngesikhathi esifanayo i-pulp yesikhumba esinomsoco, isikhumba esihle kakhulu. Zibanike ngokujwayelekile: nge-sauce ebomvu iwayini eliviniga namafutha omnqumo, okwenza isitsha sibe yinambitheka enhle kakhulu futhi elula. Ngendlela, ezihlukahlukene ezikhulile eCalifornia (kunezulu elifanele kakhulu kulokhu) libizwa nangokuthi yiCalamata (kodwa incwadi yokuqala yiC, kanti ukubiza akusho umehluko).
I-Greek Kalamata Olives
Umkhiqizo uhle kakhulu ekusetshenzisweni kwezidlo eziningi, edume kakhulu kuwo yi-pasta ne-pizza. Mhlawumbe yingakho bethanda kakhulu ochwepheshe bezolimo ezivela emazweni ahlukene. Iminqumo emihle ye-kalamata kanye nokupheka inyama yezinyane, izinhlanzi zokudoba, kanye nezaladi zesiGreki ezivamile . Kuhlanganiswe ngokuphelele noshizi, i-garlic, amakhambi.
Inani lokudla okunomsoco
Okuqukethwe kwe-caloric yalo mkhiqizo ngu-115 kcal ngamagremu angu-100. Amaphesenti angama-90 alawa makhalori angamafutha angenalutho. Okunye, izingxenye ezilinganayo ezibalulekile: ithusi nensimbi, i-calcium namavithamini, i-fiber, i-phosphorus ne-zinc, i-selenium ne-potassium. Umkhiqizo ngokwawo awunayo i-cholesterol eyingozi, icebile, futhi ihanjiswa etafuleni, ikakhulukazi e-hypostasis ekheniwe (efaka izitsha eziningi njengesithako esibalulekile).
I-Kalamata iminqumo: inzuzo
Umthombo ongenakunqandwa wama-acids angasetshenzisiwe ama-acids awusizo. Lokhu kwenza umkhiqizo uwusizo ohlelweni lwegazi nemithambo yenhliziyo. I-Kalamata inciphisa izinga legazi ezinto ezinobungozi ezifana ne-cholesterol, ihlaziye igazi, ivimbele i-prophylaxis yamacici namagundane egazi. Odokotela baqaphela imifino yanamuhla njengendlela enhle yokulwa nokucindezeleka nokuphikelela okukhulu kwegazi. Lokhu - ithuluzi elisizayo ekulwa namatshe ohlelweni lwama-excretory: izinso, isibindi, isilonda senyongo.
Umkhiqizo unamakhemikhali aphikisayo. Kuzo zivini zihlangana nevithamini E, amafutha omnumoni kanye nama-phytonutrients.
Ama-olives ka-Kalamata angumthombo wama-antioxidants elwa nokulwa kwama-radicals emzimbeni womuntu, evikela amangqamuzana kusuka ku-oxides nokulimala. Lokhu kudla, okucebile ezintweni ezinjalo, kukwazi ukuvikela ngisho nomdlavuza eziteshini zokuqala nakwezinye izifo zendalo yokuvuvukala.
Njengoba iminqumo i-calcium eningi kakhulu, ibamba iqhaza ekwakheni kahle amathambo kubantu abasha futhi igweme ukugula ngokweqile kubantu asebekhulile.
Njengemithombo ye-fiber - izihlahla zama-Kalamata zivimbela ukuqothulwa, kugcina imetabolism ezingeni elifanele, okufaka isandla ekusiliseni ngokushesha isisu ngesidlo sokutshala.
Ukuthengwa nokugcinwa kweminqumo
Uma umkhiqizo ugcinwa ngokuvumelana nayo yonke imithetho - ngokulinganisela kanye nokugcina ubuchwepheshe, ungagcinwa emabhange asekuporennyh ekamelweni lokushisa iminyaka emibili kusukela ngosuku lokulondolozwa. Vula imbiza kufanele igcinwe esiqandisini, futhi iminqumo kufanele ingasuswa ku-brine. Isiqukathi esisindile asikafaneli kahle, ngoba amathongo angakha kuleli cala. Kodwa ifilimu yokudla, efaka entanyeni yamathini - kungcono kakhulu.
I-Pasta evela ema-olivini kaKalamata iyidlo ethandwayo ye-European "inter-sea". Esikhathini sendaweni yendawo yokupheka, le talenada ithandwa kakhulu - isiphuzo eminqumo. I-Kalamata Olive Spread iyi-pasta eyenziwe izithelo ezimnyama ezivutshiwe zegama elifanayo, plus capers kanye oregano. Ngokwesiko isetshenziselwa, isakazwa ngezinkwa noma iziqhumane - ekuseni, kanye nenkezo yamakhofi omnyama aqinile. Futhi futhi: imifino esanda kumiswa, isibonelo, i-talenada izoba isuphu enhle nehambisanayo. EGrisi, i-pasta nayo ingagcwele izitsha zezinhlanzi, yihambise esitsheni esihlukile emanzini ashisayo eshisayo enyama nenhlanzi. UTalenada wathola isihloko seMedithera "caviar omnyama" ngenxa yokunambitheka kwayo okuhle kakhulu futhi okuyingqayizivele.
I-pizza yamaGreki nama-oliva ka-Kalamata
Enye iresiphi yokudla kwamaGreki neminqumo, okufanele ukupheka. Kudingeka uthathe ikhekhe elikhulu lenhlama ye-pizza, ama-gramu angu-150 e-mozzarella egayiwe, isifuba esisodwa sezinkukhu, ama-150 amagremu amakhowe, ama-gramu angu-150 we-feta, isigamu sengilazi yamafutha kalamata ngaphandle kwemigodi, i-oregano eyomile, i-salsa evela ku-utamatisi.
I-salsa yokupheka. Ukuze wenze lokhu, thatha ama-gramu angu-200 e-cherry - obomvu nokuphuzi, i-basil ye-basil, izinkezo ezimbili zewayini, u-oliva omncane nomnqumo waseDijon, ingxube yepelepele - ingcosana. Zonke izithako zixutshwe ku-blender kuze kube yilapho kutholakala inqwaba efana no-paste.
Isikhathi esilungele i-pizza sigqoke i-baking sheet, ufafaze ushizi omncane, bese-garlic (noma ama-flakes owomile).
Ukusuka ngenhla sibeka isifuba esisikiwe nesibilisiwe, amakhowe, tincetu eziqoshiwe, iminqumo emibuthanweni. Silala ne-oregano futhi ekugcineni -kuhamba okwedlule. Bhaka kuhhavini kuze kutholakale i-crust golden. Khonza nge-tomato salsa.
Yini anganipha isipho nice lokuzalwa kagogo wakhe?
Geneva Buka nge Silicone Ibhande: ngezibuyekezo nezithombe
Johann Bach usebenza uhlu
Ukwelashwa zommbila izithende futhi kususwe